नेकपा विवादमा संसद सचिवालयले के भन्यो ? हेर्नुस:: Mero Desh
नेकपा विवादमा संसद सचिवालयले के भन्यो ? हेर्नुस
Published on: २३ फाल्गुन २०७७, आईतवार ०८:१६
काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले नेकपा कानुनी रुपमा विभाजन नभएको जनाएको छ । सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भए पनि कानुन एउटै भएका ले आजको बैठकमा दुवै नेकपाका सांसदहरु सत्ता पक्षकै ‘रो ‘मा बस्ने गरी व्यवस्था
मिलाएको जानकारी दिए । ‘सत्तारुढ दलको कानुन त एउटै छ भनेर हामीले अहिलेसम्म बुझेका छौ’, पाण्डेको भनाइ छ । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दुई जना भएकोबारे पत्रहरू आएपनि को प्रमुख सचेतक भनेर सचिवालयले छुट्याउने नसक्ने बताए । उनले सचिवालयले दलको विवाद निरुपण गर्न नसक्ने भन्दै सहजीकरणको भूमिका मात्रै निभाउने जानकारी दिए ।
यी सवै कुराको समाधान निर्वाचन आयोगले समाधान गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्छौँ’, पाण्डेको भनाइ छ । त्यस्तै संघीय संसद सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची परिवर्तन हुनसक्ने पनि जनाएको छ । प्रवक्ता पाण्डेले आइतबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै विगतको परम्परा अनुसार पनि सम्भावित कार्यसूची परिवर्तन हुनसक्ने जानकारी दिएका हुन् ।
सचिवालयले शनिबार हिजो जारी गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा राष्ट्रपतिले पठाएको पत्र, शोक प्रस्ताव र केही अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची रहेको जनाएको थियो ।नेकपा विवादपछि दुई जना संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतक पनि दुई जना छन् ।
प्रवक्ता पाण्डेले सरकारले ल्याउने बिजनेस र दलहरूको सहमतिका आधारमा संसद बैठक कति समय चल्ने भन्नेमा निर्भर हुने पनि प्रस्ट पारेका छन् ।नेकपा विवादमा संसद सचिवालयले भन्यो- दल कानुननीरुपमा एउटै छ, सहजीकरणको भूमिका मात्रै निभाउन सकिन्छ ।